प्राइम कमर्शियल बैंकको १० वर्षे अवधिको ऋणपत्र निष्कासन - Aathikbazarnews.com प्राइम कमर्शियल बैंकको १० वर्षे अवधिको ऋणपत्र निष्कासन -
प्राइम कमर्शियल बैंकको १० वर्षे अवधिको ऋणपत्र निष्कासन
प्राइम कमर्शियल बैंक लिमिटेडले आजदेखि १० वर्षे अवधिको ऋणपत्र निष्कासन गरेको छ । बैंकले प्रतिकित्ता रू. १ हजार अंकित मूल्यका रू. २ अर्ब ५० करोड बराबरको २५ लाख कित्ता ऋणपत्र निष्काशन गरेको हो । बैंकले निष्कासन गर्न लागेको ऋणपत्रको नाम ‘१० प्रतिशत प्राइम डिबेन्चर २०८८’ रहेको छ ।
कुल कित्ता ऋणपत्रमध्ये रू. १ अर्ब बराबरको १० लाख कित्ता बैंकले सर्वसाधारणलाई विक्री गर्नेछ भने बाँकी रू. १ अर्ब ५० करोड बराबरको १५ लाख कित्ता भने व्यक्तिगत तवरबाट विभिन्न संघसंस्थाहरुलाई विक्री गर्नेछ ।
सर्वसाधारणका लागि बिक्री गरिने ऋणपत्रमध्ये पनि ५ प्रतिशत अर्थात ५० हजार कित्ता सामूहिक लगानी कोषका लागि सुरक्षित गरिएको बैंकले जानकारी दिएको छ । यो ऋणपत्र खरिदका लागि छिटोमा चैत २१ गतेसम्ममा आवेदन दिनुपर्नेछ भने सो अवधिसम्ममा माग बमोजिम आवेदन नपरेमा ढिलो अवधि चैत ३० गतेसम्म विक्री खुला गरिने बैंकको भनाई छ ।
यो ऋणपत्र खरिदका लागि न्यूनतम २५ कित्तादेखि अधिकतम ५ लाख कित्ताका लागि आवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ । ऋणपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक आरबिबि मर्चेन्ट बैंकिङ्ग लिमिटेड रहेको छ । विक्री प्रबन्धकसँगै यो ऋणपत्र खरिदका लागि सी–आस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका शाखा कार्यालयहरुबाट आवेदन दिन सकिनेछ । यो ऋणपत्रलाई केयर रेटिङ्ग नेपालले कम कर्जा जोखिमको संकेत गर्ने ‘केयर एनपी डबल ए माइनस इस्यूअर रेटिङ्ग’ प्रदान गरेको छ । योे रेटिङ्ग प्राप्त गर्ने संस्थाहरुलाई समयमा नै वित्तीय दायित्व पुरा गर्ने सम्बन्धमा पर्याप्त मात्रामा सुरक्षित रहेको मानिन्छ ।
४१ अंकले बढ्यो नेप्से सूचक, विकास बैंक र फाइनान्समा लगानीकर्ताको आकर्षण
नबिल बैंकले करिब ३० हजार कित्ता सेयर बिक्री गर्ने, इच्छुक जोकोहीले आवेदन दिन सकिने
गरिमा विकास बैंकको नयाँ शाखा रुपन्देहीको ड्राईभरटोलमा
१६ करोड बढी सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण
नबिल र एनबी बैंकबीचको मर्जरलाई राष्ट्र बैंकले दियाे अन्तिम स्वीकृति
ग्लोबल आइएमई बैंकको एटिएम सेवा लिवाङ्गको आर्मी व्यारेक परिसरमा